Papa M na Mama M Chọrọ Ịgba Alụkwaghịm | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gị na papa gị na mama gị kwurịta ya. Gwa ha na obi adịghị gị mma ma ọ bụ na ị maghị ihe ị ga-eme eme. Ha nwere ike ịkọrọ gị ihe na-emenụ. O nwekwara ike ime ka obi ruo gị ala.
Ọ bụrụ na papa gị na mama gị emeghị ka obi ruo gị ala, i nwere ike ịkọrọ ya ezigbo enyi gị tọrọ gị.—Ilu 17:17.
Ihe ga-akacha enyere gị aka bụ ịkọsara ya Chineke n’ekpere. Baịbụl sị na Chineke bụ “ Onye na-anụ ekpere. ” (Abụ Ọma 65:2) Kọọrọ ya otú ọ dị gị n’obi, ‘ n’ihi na ihe banyere gị na-emetụ ya n’obi. ’—1 Pita 5:7.
Ihe ị na-ekwesịghị ime
Ichefu alụkwaghịm papa gị na mama gị gbara yiri ịgbake mgbe aka gbajiri gị. Ọ naghị adị mfe, ma ọ ga-emecha kwụsị iwute gị
Eburula papa gị na mama gị iwe n’obi. E nwere otu nwa okorobịa aha ya bụ Daniel. Papa ya na mama ya kewara mgbe ọ dị afọ asaa. Daniel sịrị, “ Ihe gbasara anyị emetụghị papa anyị na mama anyị n’obi. Ha echetadịghị ahụhụ anyị ga-ata ma ha gbasaa. ”
Olee nsogbu Daniel nwere ike inwe ma ọ bụrụ na ọ kwụsịghị iwe a ọ na-ewere papa ya na mama ya?—Ihe ga-enyere gị aka: Gụọ Ilu 29:22.
Gịnị mere o ji dị mma ka Daniel gbaghara papa ya na mama ya ihe ọjọọ ha mere ya?—Ihe ga-enyere gị aka: Gụọ Ndị Efesọs 4:31, 32.
Akpala àgwà ga-akpatara gị nsogbu. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Denny kwuru, sị, “ Mgbe papa m na mama m gbara alụkwaghịm, obi bidoro jọwa m njọ. Anaghịzi m eme nke ọma n’ụlọ akwụkwọ. Adakwara m n’ule n’afọ ahụ. Ka afọ ahụ gachara, ... ihe m na-arụzi na klas bụ ime ihe ọchị, mụ na ọtụtụ mmadụ lụkwara ọgụ. ”
Olee ihe i chere mere Denny jizi na-eme ihe ọchị na klas? Oleekwa ihe i chere mere ya na ọtụtụ ndị ji na-alụ ọgụ?
Olee otú ihe e kwuru na Ndị Galeshia 6:7 nwere ike isi nyere ndị dị ka Denny aka ka ha ghara ịkpa àgwà ga-akpatara ha nsogbu?
E mee mmadụ ihe, obi agbawaa ya, ọ na-ewe oge tupu ya enweta onwe ya. Ma, ọ bụrụ na ị gbalịa na-akpa àgwà otú ị na-akpabu, ị ga-eji nwayọọ nwayọọ nwetawa onwe gị.
Ụfọdụ isiokwu ndị dị n’akwụkwọ a kwuru gbasara ịṅụ ọgwụ ọjọọ, mmekọ nwoke na nwaanyị, na nwoke na nwaanyị ịkpa.